Shiinaha 99% DMAA 1,3-dimethylamylamin HCL budada CAS 105-41-9 warshad iyo shirkado | Aragtida
99% DMAA 1,3-dimethylamylamin HCL budada CAS 105-41-9
Magaca Kiimikada: 1,3-dimethylamylamin HCL
Micnaha: 99% DMAA; 1,3-Dimethylpentylamine hydrochloride
CAS MAYA. 105-41-9
DMAA, waa kiciyaha badanaa loo isticmaalo kordhinta tamarta jimicsiga iyo xoogga. 1,3 dimethylamylamine waxaa badanaa laga helaa dheellitirka shaqada kahor, sida Jack3d iyo SciVation Quake 10.0. Kordhinta tamarta DMAA waxay socotaa saacadaha 35 iyada oo aan shil ama daal lahayn. Si ka duwan kafeyn iyo kiciyayaal kale, DMAA kuma dareyso daal ka dib markii ay saameyntiisu dhammaato.
DMAAkiimikaad ayaa lagu soo saari karaa. Waxaa la sheegay in DMAA sidoo kale si dabiici ah ugu jiro saliida geranium geedka (Pelargonium graveolens). Dhaqan ahaan, warshadani waxay qiimo ku laheyd warshadaha udugga ee udgoonkeeda wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, warbixinno badan ayaa soo jeedinaya in DMAA aysan dhab ahaantii ka jirin saliidda geranium iyo DMAA ee ku jirta kaabisyada waxay u badan tahay inay ka yimaadaan ilaha synthetic.
Dheeraadka nafaqada, nafaqeeyaha nafaqada leh, nafaqeeyayaasha nafaqada leh, waxyaabaha cuntada lagu daro ee kululeeyaha, alaabta ceeriin ee dawooyinka. kaabayaasha isboortiga, nafaqada nafaqada isboortiga, dheellitirka jirka.
1. Waa nooc ka mid ah nafaqada.
2. Waxay hagaajin kartaa dheef-shiid kiimikaadka jirka ee muruqyada waxayna si weyn kor ugu qaadaysaa awoodda murqaha iyo adkaysiga cuntada oo keliya.
3. Waxaa loo isticmaali karaa inay noqoto nafaqeeye.
4. Waa mid ka mid ah nafaqooyinka ugu caansan uguna wax ku oolka badan iyo sidoo kale sheyga lagama maarmaanka u ah jir-dhiseyaasha.
5. Waxa kale oo si weyn u adeegsada ciyaartooyda kale, sida ciyaartoyga kubada cagta, ciyaartooyda kubbadda koleyga iyo wixii la mid ah.
1. Dhexdhexaadinta dawooyinka, iskudhiska jirka ee ganaaxa iyo kalluumeysiga, alaabada daryeelka caafimaadka, iwm.
2. Kordhi tamarta oo kor u qaad tamarta jidhka
3. Waxaa loo adeegsaday fasalka culeyska halkaas oo aad si weyn u yareyn karto rabitaanka cuntada oo xakameynaya saameynta kuleylka.
4. Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa maaddooyin kale oo leh kaabayaal cunto.
25KG / durbaan, ama si waafaqsan shuruudahaaga.
budada madarad cad
Wareeg gaar ah [α] D20 °
Xaaladda xalka (Gudbinta)
Amino acids kale
0.25EU / ml
Hore: Polyvinylpyrrolidone k30 / PVP K-30 cas 84057-81-8
Xiga: Nadiif sare 2-Adamantanone 99% CAS 700-58-3
Qiimaha wanaagsan Phenylephrine Hydrochloride Cas 61-7 ...
Warshadaha GMP waxay bixiyaan qiimo wanaagsan Sulfadimethoxine p ...
Fasalka Pharmaceutical 99% Lanosterol la p wanaagsan ...
fasalka sare 2,4-Dichlorophenol 99% ee sy ...
Qiimaha wanaagsan dhexdhexaadiyaasha daawada 99% Nic ...